वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल किन रिसाए प्रचण्डसँग ? Global TV Nepal
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल किन रिसाए प्रचण्डसँग ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको मात्रै पेशी तोकियो
भीषण आगलागी अनामनगरको फर्निचर शोरुममा
सभामुख एमालेको निर्देशनमा चलेको मुख्यमन्त्री राईको आरोप